China Stainless steel disc စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- သံမဏိ ပရိုဖိုင် Tags: 301, 304, 304L, 304N, 310S, 316, 316LN, 316Ti, 317, 321, 409, 420, Stainless steel angle, Stainless Steel Channels, Stainless steel H-beam, Stainless steel I-beam ၊ Stainless steel ingot ၊ Stainless steel round rod ၊
နိဒါန်း stainless steel disc ၏ချေးခံနိုင်ရည်သည် အဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏သတ္တုစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ (ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ဆီလီကွန်၊ အလူမီနီယမ်၊ မန်းဂနိစ်စသည်ဖြင့်) နှင့် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပြီး ၎င်းသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် ခရိုမီယမ်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။Chromium သည် ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှု မြင့်မားပြီး သတ္တုကို ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ခွဲထုတ်ရန်၊ သံမဏိပြားကို ဓာတ်တိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် သံမဏိပြား၏ သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် သံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် passivation ရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်သည်။Passivation ဖလင်ကို ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ချေးခံနိုင်ရည် လျော့နည်းသွားသည်။
အရွယ်အစား အထူ: 0.2-3mm, သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များအဖြစ်
အချင်း: 100-1000mm, သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များအဖြစ်
အပေါ်ယံ 2B၊ BA၊ 4K၊ HL၊ Mirror စသဖြင့်
လျှောက်လွှာ 1. ဓာတ်ကူပစ္စည်း စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း။
2. ရေနံလုပ်ငန်းနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင် အပူချိန်မြင့်မားသောဓာတ်ငွေ့စစ်ထုတ်ခြင်း။
3. သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းတွင် မြင့်မားသောအပူချိန် flue gas filtration နှင့် သန့်စင်ခြင်း။
4. Fluidized အိပ်ရာထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း။
5. အဏုမြူဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များကို စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း။
ယခင်- Stainless Steel Channels များ
Stainless Steel Disc ကွက်လပ်များ
Stainless Steel Disc စက်ရုံ